Semalt Expert: Inona no antony mahatonga ny SEO ho maivana kokoa noho ny tenifototra?
Miankina amin'ny teny fanalahidy voafantina sy ny tranonkala ny fanatsarana ny SEO Ampifanaraho amin'izy ireo ho an'ny ati-tany sy ny fanatanjahantena. Ny fampiasana teny fanalahidy dia ampahany manan-danja amin'ny fizotry ny SEO. Raha ampiasaina ho dingana lehibe amin'ny paikady, dia mety hiasa amin'ny mpanao dokam-barotra indraindray. Ny fampiasana tafahoatra ny teny fanalahidy dia mety hitarika ho amin'ny famaizana, na mety hanelingelina azy io izay miasa amin'izy ireo avy amin'ireo singa stratejika manan-danja. Ny mpikaroka dia tokony hifantoka amin'ny anton-tsarimihetsika lehibe kokoa eo an-toerana.
Mpitantana Success Successor Semalt ,Manazava i Frank Abagnale hoe inona no lafiny manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny toerana - was zu beachten bei umzug checkliste.
Ny fametrahana ny votoatin'ny fitaovana dia mihoatra noho ny fepetra tenenina
Ny toerana misy ny teny fanalahidy ao amin'ny pejy tsirairay dia mihoatra noho ny impiry izy ireo no miseho. Ohatra, ny lohan-doha dia manan-danja kokoa noho ny tongotra, na ny votoatiny midadasika misy tsipika lava. Ny teny fanalahidy ao anatin'ilay lahatsoratra dia afaka manova ny votoatiny, azo zaraina sy manan-danja hita ao anatin'ny rafitry ny tranonkala.
Fitadiavana fandinihan-kevitra sy fandinihan-jatovo
Nanova ny Google amin'ny fampiasana fehezanteny maotina ho toy ny sakana Manaova fampitahana tokana amin'ny fanadinana karoka. Fa kosa, ireo botsik'i Google dia mametraka fangatahana be dia be amin'ny fehezan-teny lava mba hametrahana azy ny tanjon'ny tranonkala. Mihevitra ny fampiasana fiteny iray semantika izy io, ary mandany izany amin'ny fangatahana ilaina, fomba iray antsoina hoe semantic fikarohana. Ny tombotsoan'ny fikarohana semantika dia ny tsy mampaninona ny fehezan-teny fototra ampiasain'ny iray raha toa ka mifanaraka amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra..Ny tompona orinasa dia afaka mifantoka amin'ny zavatra mahaliana ny raharaham-barotra sy ny marika.
Fijerena ny tranonkala sy fitantanana
Ny tranonkala dia tokony hanolotra mora foana ny mpampiasa amin'ny fomba iray mahatakatra ny fomba itodihany. Google dia manatontosa izany amin'ny fiantohana fa mora hita ny tranokala. Tranonkala madio sy voalamina, miaraka amin'ny Fahazavana tsotra sy marefo amin'ny tranokala fananan-tany maro kokoa noho ny tranonkala misy rohy avoaka manerana ny interface. Sitemaps Ary ny safidy nentim-paharazana toy ny Contact, About, and Services dia loharano tena tsara. Ny votoatin'ny tranonkala dia tsy misy dikany raha misy dia rafitra mavesa-danja sy marefo.
Site Speed ​​and Security
Nitombo ny fifaninanana ary maro ny fidirana amin'ny fitaovana amin'ny hafainganam-pandehan'ny lahatahiry, manatsara bebe kokoa. Ny fametrahana rafitra fiarovana madio, ny fampihenana ny habe ary ny fanesorana tsy ilaina Ny tsy fitoviana dia fomba hampitomboana ny hafainganan'ny tranokala. Zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny tranokala, ary ireo tranonkala manana SSL (voatondro https :) dia miezaka hanatsara ny toerany. Ny sandan'ny fiarovana ny tranokala dia andrasana hivoatra rehefa mandroso ny fotoana.
Ilaina izao ny fampidinana finday
Ny tranonkala finday mifangaro dia mahazo fanatsarana fanatsarana raha oharina ho an'ireo izay tsy. Google dia namoaka fanavaozam-baovao izay mamadika ny fomba hamaritana ny tranokalan'ny namana. Google dia manameloka ny tranonkala rehetra tsy mifanena ny tokonam-baravarana. Na dia misy tranokala aza ny tranokala, ny hetsika Google dia famantarana ny fahitana efa ela dia hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ary tsy dia misy loatra amin'ny zavatra tsy misy dikany toy ny teny fanalahidy.
Tahaka ny teny fanalahidy manampy amin'ny fitadiavana votoaty na fifaninanana amin'izao fotoana izao ireo porofo, dia mampiseho fa ny fampiasana paikady, izay manodina ny fampiharana ny tenimiafina dia tsy ampahany kely amin'ny asa. Ireo singa mifototra amin'ny rindrankajy dia manatsara ny traikefan'ny mpampiasa, manatsara ny kalitaon'ny tranokala, ary manampy amin'ny fanalàn'ny sazy. Araka ny nambaran'ny mpividy azy Fanompoam-pizoran'ny Semalt , Ny antony manatsara ny fahafahana manatsara ny fiantraikany eo amin'ny lazan'ny tranonkala ihany koa.